न बाबा फर्किए, न शव आयो – Koshidaily
न बाबा फर्किए, न शव आयो
access_alarms Koshi daily २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०४:१२	chat_bubble_outline 0	Comments
बुटवल : भर्खर ६ वर्ष पुगेका निरज थापा बुवाले विदेशबाट ल्याएको चकलेट खाँदैछन्। उनी ६ वर्षसम्म विदेशमै बिताएका आफ्ना बुवा बाबुराम थापाको अनुहार बल्ल चिन्दै थिए। दुई/तीन वर्षको अन्तरमा घर आएका बाबुराम छोराहरूसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन पनि पाएका थिएनन्।
चैत ७ गते रुपन्देही सैनामैनाको डेरा पुगेर झोला खोल्दा ६ वर्षीय निरज र ८ वर्षीय कुशल निकै खुसी भएका थिए। त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन। दाजुभाईले बुवासँग पाँच दिनभन्दा धेरै बिताउन पाएनन्। उपचारका लागि चैत १३ गते बुटवल आएका उनी कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भए। श्रीमान भेट्न बुटवल आएकी उनीहरुका आमा रीतासमेत अनुहार नै नदेखि फर्किइन्।
पाल्पाको रिब्दिकोट कुशुमखोलाबाट एक वर्षअघि मुर्गीयाको सिसैडाडामा डेरा गरी बस्न थालेका उनीहरू पढ्न भन्दै तराई झरेका थिए। मासिक ३ हजार भाडामा तिर्ने गरी एउटा भान्छा र कोठा लिएर बसेकी रीताका दुई छोरा नजिकैको प्रभात बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। कुशल कक्षा १ र निरज युकेजीमा पढ्दैछन्। बाबुरामको कोरोना अस्पतालमा भएको लापरबाहीका कारणले ज्यान गयो। अब उनी घर त फर्किने छैनन् तर, चार दिनसम्म पत्नी र छोराहरूले शव देख्न पाएका छैनन्।
कोरोनाको चेकजाँच नहुन्जेल थापाको शव अस्पतालकै बेडमा पल्टिरह्यो। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। अहिले शवगृहमा राखिएको छ। घरमा बुवा पर्खिरहेका नाबालकले न बुवा देख्न पाए, न त लास नै। दुई नाबालक टोलाइरहन्छन्। आमालाई बाबा खोइ भनेर सोध्नसमेत सक्दैनन्। चार दिन बित्दासमेत बाबुरामको शव उठेको छैन। बाबुरामकी पत्नी रीताले लापरबाहीका कारण पतिको मृत्यु भएको भन्दै छानबिन र क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छन्।
कोरोना आशंकामा अस्पतालका चिकित्सकले ‘पशु व्यवहार’ गर्दा पतिको मृत्यु भएको उनको आरोप छ। तीन दिन अस्पतालमा बस्दासमेत कोरोना परीक्षण नगरी राख्दा उनको ज्यान गएको हो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले मृत्यु भएको तीन दिनपछि निमोनियाका कारण ज्यान गएको दाबी गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनालले निमोनियाका कारण उनको मृत्यु भएको बताए। उनले यो घटनामा चिकित्सकको नभइ व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउँछन्।
सामान्य उपचारका उपकरणसमेत नरहेको धागो कारखानाको बेडमा उनको चैत १६ गते मृत्यु भएको हो। उनी उपचारका लागि चैत १३ गते पुगेका थिए। सामान्य ज्वरोको चेकजाँच गराउन गएका उनमा निमोनिया रहेको अस्पतालले बताएको छ। मृत्यु भएपछि मात्रै स्वाब परीक्षण गरिएको आफन्तहरूले जानकारी दिएका छन्।
अस्पतालका कोरोना फोकर पर्सन डा. सुदर्शन थापा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि सतप्रतिशत विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्। मृतककी पत्नी रीताले अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीले आफ्ना पतिको मृत्यु भएको भन्दै सत्यतथ्य रिपोर्टसहित कारबाही र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेकी छन्। ‘लापरबाहीबाट श्रीमानको ज्यान गएको हो। दोषीलाई कारबही गरी क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ,’ उनको माग छ।
दुई नाबालक छोरासहित रुपन्देहीको सैनामैनामा बस्दै आएकी उनलाई अस्पतालले अहिलेसम्म मृत्यु के कारणले भयो भन्ने जानकारी दिएको छैन। कोराना अस्पताल निर्माण गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले यस विषयमा केही बोलेका छैनन्। थापाका परिवार बस्दै आएको सैनामैना नगरपालिकाले भने राहत दिने जनाएको छ।
नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले मृतकका परिवारलाई राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूकै दोहोरो भनाइले थापाले मलामी नपाउने शंका देखिएको छ। कोरोना फोकल पर्शन डा. थापाले कोरोना नभएको भन्न नसकिने बताउँछन्। उनले त्यसो भनिरहँदा आफन्त र परिवार शव नजिक जान पनि डराएका छन्।